विशेष Archives - Page2of 8 - Dalit Online - Dalit Online
बेलायतमा परिचित अनुहार हो, प्रतिक दुधराज । नेपाली मुलका बेलायतवासीमाझ उनी चर्चित छन् । स्कुल कलेजसँगै फिल्मी बजारमा प्रतिकको नाम स्थापित भइसकेको छ । प्रतिक ललितपुरमा जन्मिएका हुन् । अध्ययनका लागि काठमाडौंको ग्यालेक्सीमा भर्ना भएका उनलाई सौभाग्य मिल्यो कक्षा १ देखि नै वेलायतमा अध्ययन गर्ने मौका । प्रतीक स्कुल र कलेजमा पढाइमा सधै अब्बल रहे । […]
संविधान घोषणा गर भनेर हामीले पहिलो संविधानसभामा ४३७ जना सभासदको हस्ताक्षर संकलन गर्यौं । जति बनेको छ त्यति घोषणा गर भनेर त्यो हस्ताक्षर गराएका थियौं । हस्ताक्षर गर्नेहरु सबै राजनैतिक दलसँग सम्बन्धित उत्पीडित समुदायका सभासदहरु थिए । देव गुरुङ पासाङ शेर्पा र म लगायतका साथीहरु त्यसमा क्रियाशिल थियौं । मधेसका साथीहरु पनि क्रियाशिल हुनुहुन्थ्यो । […]
दलित अनलाइन अब तेस्राे वर्षमा (फोटो फिचर)
काठमाडौ– समानता र सामाजिक न्याय मूल नारा लिएर सुरु भएको दलित अनलाइन डटकम दोस्रो वर्ष पूरा गरी तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बुधबार राजधानीमा दलित अनलाइन डटकमले संविधानको तीन वर्ष : दलितले के पाएँ के गुमाएँ भन्ने एक विशेष मिडिया संवाद कार्यक्रम गरी आयोजना गरी आगामी दिनमा समुदायगत मुद्दामा दलित अनलाइन डटकम अझै सशक्त […]
विद्यार्थी जीवनबाटै आन्दोलनमा लाग्दा मेरो जन्म पुर्वी नेपालको भोजपुर जिल्ला दिङग्लामा ४९ वर्ष पहिले बुबा पुर्णवीर र आमा बुद्धमायाको कोखबाट भएको थियो । मेरो स्कुले पढाइ स्थानीय अरुण मावि. भोजपुर दिध्रलाबाट सुरु भएर मोरंगका गोबिन्दपुर (उल्लुघुटु), इटहरी हुँदै उर्लाबारी मोरंगको सुनपकुवा मावि. बाट माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरे । जातको आधारमा गरिने सामाजिक विभेदको मार सिंगो […]